Talallii COVID-19 - King County
Daa'immanii fi ijoolleen ji'a 6 fi isaa ol ta'an amma talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'u
Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.
Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/covid/vaccine.
Eenyutu talaallii argachuu danda’a amma
Tokkoon tokkoo nama umrii 5 fii olii ammatti talaallii COVID -19 argachuuf ulaagaa hinguuta. Yeroo ammaa kanatti, talaalliin COVID-19 ijoollee umrii 5 gadiiti hin hayyamamne. Qorannoowwan yaalii kiliniikaa ijoolleef adeemsifamaa jira.
Waa’ee ulaagaalee barachuu fii King Kawuntii keessati talaalli argachu.
Uumurii 5 fi ol namni ta’e hundi talaallii ittisa olkaasu (booster shot) argachuu qaba
Talaalliiwwan ittisa ol’kaasan (booster shots) kan calqabaa (umurii 5 fi ol)
Uumurii 5 fi isaa ol namni ta’e hundi gutumaan guutuutti eegamuuf kenna talaallii ittisa ol’kaasu (booster dose) argachuu qaba:
Kenna lammaffaa Pfizer ykn Moderna edda fudhatannii ji’oota shan booda (Hubachiisa: Namoonni dandeettiin dhukkuba ittisuu qama isaanii laafaa ta’e kenna dabalataa fudhachuu ni danda’u ta’a. Ittifufiinsaan kenna isa dhumaa edda fudhattanii ji’oota 3 booda talaallii ittisa ol’kaasu (booster)fudhaa.
Erga doozii J&J tokko fudhatan baatii 2 booda.
Talaallii buustarra lammaffaa
Namooni talaallii COVID humneessaa(buustara) lamaaffa Pfizer ykn Moderna argachuu qaban:
Waggaa 50 fi isaa ol
Wagga 12 fi isaa ol ta’e humnii dhukkubaa ofirraa ittissuu qaamaa isaanni heedugallessan ykn baay’ee laaffee. Odeeffanoo dabalata waa’ee tallaallii namoota humni dhukkubaa ofirra ittisuu laaffee fuula kanarra daawwadha.
Akkasumas warri ulaagaa guutuu:
Umurii 18 fi isaa ol ta’an kanneen doosiiwwan jalqabaa fi buustara J fi J fudhatan
Yoo ulaagaa guuttan, buustara 2ffaa yoo xiqaatee baatii 4 booda erga buustara 1ffaa fudhataani argachuu ni dandeessu.
Tallaallii namoota humna dhukkubaa ofirra dhoorku laaffaa qaabanuuf
CDC n (Heedugallesii Dhukkubaa To’achuu fi Ittissuu) namni kamiiyyu wagga 5 fi achii’olli akkasumas huumni siirna qaamma dhukkubaa ofirra ittisuu kan heedugallesan ykn baay’e laaffee doozii sadaffaa fudhachuu akka qaban gorsa. Lilmoon/talaallii sadaffa kun qaama walfaannee tallallii dhurratti malle buustara miti.
Namni kamiiyyu umrii 12 ykn achii’oli kan huumna dhukkubaa dhoorkee laaffaa qabu doozzii buustara 2 fudhachuu qaba.
Yoo dooziin keessan 2- durra Pfizer/Moderna ta’e:
Buustara 1ffaa: Pfizer/Moderna, erga doozii 3ffaa fudhattanii baatii 3 booda
Buustara 2ffaa: Pfizer/Moderna erga buustara 1ffaa fudhattanii baatii 4 booda
Kana jechuun akka waligalatii doozii 5 jechuudha
Yoo doozii 1ffaa J&J fudhattan:
Doozii dabalata: Pfizer/Moderna, erga doozii J&J tokko fudhattani baatii 2 booda
Buustara 1ffaa: Pfizer/Moderna, erga doozii dabalata fudhattani baatii 2 booda
Buustara 2ffaa: Pfizer/Moderna, ergga buustara 1ffaa fudhattani baatii 4 booda
Kana jechuun akka waligalatii doozii 4 jechuuda.
Nageenyummaan talaallii duursaadha
Talalliiwwan COVID-19 tiin dirqamaan qorannaa saayyinsaawaa gadi fageenna qabu jala darbuu qaban kan hirmaatonni qorannaa kanaa kumaatamootaan talaallii fudhatan. Bulchiinsi Nyaataa fi Dawaa (FDA) odeeffannoo saayinsaawaa tahe kan qorannoo kana irraa argamee madaaludhaan talaalliin kun balaa irraa bilisa tahuu fii buaa qabeessaa tahu murteessa. FDAn xinxalaaf gorsoota garee gorsoota saayiintistootaa fii hayyootaa irratt irkata, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC). Walgayiiwwan VRBPAC uummataaf banaadha.
Yoo talalliin kun sadarkaa guutee kan bulchiinsa dawaa biyyoollessaatiin(FDA)n kaahame balaa irraa bilisa fi bu'a qabeessaa tahuu murtaahe, bulchiinssi dawaa biyyoollessaa talalliiwwan ni dhiheessa akka U.S keessati itti fayyadamaniif.
Eega Bulchiinisi Dawaa Biyyoollessaa murteessee, yeroo lammaaffaafi qaamni gorsotataa ykn hayyootaa qoricha talaalli walabaa tahan, koree gorsaa raawwii talallii irraa deebi'anii odeeffannoo balaa irraa bilisa fi bu'a qabeessumma laalanii yaadaa CDC kennan.
Nageenya Talaallii Toohachu:
Eega talaalliin akka itti fayyadaman hayyama argate, akkaataan naganyaa itti toohatum safety monitoring systems hin qophaha balaa hin barbaadamne eeguuf jecha. Yoo balaan hamaan hin yaaddamne talallii irra argame, hayyoon daddaffiin dalaganii akka dhugaa nageenyyaaf yaaddessaa tahe tahuu murteesuf. Kun tajajila itti fufiinsan xinxalluudha, eeguma qorannaa saayyinsaawaan geefamee boodallee. Talaallii COVID-19 tiif, Buufata Tohannaa fi Ittisa Dhukuba (CDC) fi Bulchiinsa Dawaa Biyyoollessaa (FDA) akkaataa tohannaa nageenyaa dheeressee ykn bal'isee jira uf eeggannoo xinxaluuf akkuma argameen. Akkasumas talaalliin COVID-19 hanga danda'ameen balaa irraa bilisa tahuu mirkaneesuuf.
Odeeffannoo dabalataa: Yunaaytid Isteets keessatti Nageenya Talaalliiwwan COVID-19 Mikaneessuu , CDC (weebsaayiitin Ingiliffaa qofaan).
Ogeeyyii fayyaa eeyyama qabaniif leenjii qaban qofatu talaalliiwwan kennuu danda’a
Namoota eeyyaama qabanii fii talaallii keennuuf leenji'an qofatu talaallii keennu danda'a. Eega talaalliin kun bal'innaan hawaasaaf dhihaate, ogeeyyiin fayyaa gosa adda addaa talaalli tartiibaan kennu. Ogeeyyonni fayyaa kun talaalli kilinika keessaati akkasumas hospitaalaa fii bakka hawaasiin yeroo tokkoo waliti qabamut.
King Kaawuntii keessatti
Odeeffannoo dabalataa waa’ee talaallii COVID-19 tiini
Dipaartmentii Fayyaa Isteeta Waashingitani COVID-19 Vaccine webpage
CDC 8 Things to Know About Vaccine Planning
Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/oromo